TrackR Bravo, chefuo ịhapụ ihe onwunwe gị | Gam akporosis
Anyị niile echefuru obere akpa anyị ma ọ bụ mkpịsị ugodi anyị mgbe anyị na-apụ n'okporo ámá. Ma ọ bụ ihe dị njọ: ịchọta ha naanị mgbe ị na-eme ọsọ ọsọ. Nke a bụ ebe ọ na-abata TrackR Bravo, ihe eji akọ arụ ọrụ ejiri ngwa ngwa chọta ihe ọ bụla: igwe, obere akpa, igodo, anu ulo, akpa ...
Onwe m, enwere m onyinye nke ichefu ihe, yabụ mgbe m natara ngwa ngwa a, achọpụtara m na m bụ onye ziri ezi ịme ngosi nyocha nke TrackR Bravo. Maka nke a, ejiri m ya otu ọnwa ma mmetụta m adịla mma.
1 A mfe na ala imewe
2 Ijikọ TrackR Bravo na ekwentị
3 TrackR Bravo, na-anwale ya n'okporo ámá
4 Mkpebi mgbe nwalere TrackR Bravo
A mfe na ala imewe
Ngwaọrụ nwere njirimara ndị a ga-adị obere ma TrackR Bravo na-agbaso ihe edeturu na nkebi a. Ma nke ahụ bụ obere ngwaọrụ nwere dayameta nke naanị 3.1 cm na mgbakwunye na ọkpụrụkpụ nke 0.4 cm. Site na obere akụkụ ndị a, ọ ga-adị mma iji ya na igodo anụ ụlọ gị, obere akpa ma ọ bụ olu akwa iji nye ụfọdụ ihe atụ nke ohere nke ngwa a.
El Aka TrackR Bravo dị ezigbo mma, nwere obere ekele na ahụ ya kpuchie na anodized aluminom, nke na-echebekwa onye nchọta site na ichebe ya megide bumps na ọdịda.
N'ihu anyị na-achọta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, yana a bọtịnụ na-enye karịa nrụgide ziri ezi mgbe a na-agbanye ya. Gosiputa usoro amamịghe iji wepu batrị site na ekwenti, jiri obere nko ahu nke zoro n’ime aru nke onye Bluetooth.
Ijikọ TrackR Bravo na ekwentị
Iji mekọrịta TrackR Bravo na ekwentị m, naanị m ga-ebudata ngwa ngwaọrụ na ekwentị m ma soro usoro abụọ dị mfe: gbanye bluetooth ma pịa bọtịnụ na nchọta iji mekọrịta ha. N'ihe na-erughị otu nkeji, anyị nwere ihe niile ejikere. Buru n’uche nke ahụ TrackR Bravo nwere Bluetooth 4.0 ma chọọ Android 4.0 ma ọ bụ karịa ka ọ rụọ ọrụ.
Usoro Bravo dị mfe: ọ nwere njikọta Bluetooth 4.0 na-adịgide adịgide, ọkụ ọkụ agbakwunyere na ọkụ okwu abụọ na -emepụta ụda ruo 85 dB. Site na njirimara ndị a, ụdị batrị CR1616 ya zuru oke maka gadget iji nweta ndụ bara uru nke ihe dị ka afọ 1, site na ngwa ngwa TrackR Bravo ị ga-ahụ ole ikike batrị fọdụrụ.
Ikwu okwu banyere Ngwa ngwa ngwa TrackR Bravo n'ihi na gam akporo, na-ekwu na ọ bụ nnọọ ihe dị mfe na kensinammuo. Ọ bụ ezie na akụrụngwa a enweghị GPS dị n'ime ya, ngwa ahụ ga-arịọ maka ikikere iji rụọ ọrụ GPS. Ihe kpatara ya? Ọ bụrụ na ị tụfuo ihe, ngwa ahụ na-edekọ ọnọdụ ikpeazụ ya na iji Google Maps ka ị wee mara ebe ihe ahụ furu efu.
N'ụzọ dị otú a, Ihe ikwesiri ime bu ichota uzo esi aga na nhazi ihe ebe ihe a furu efu site na ihe ndi TrackR. I nwekwara ike ịdebanye aha ma jiri ọrụ GPS nke Crowd. Site na ọrụ a, ọ bụrụ na onye ọrụ ọ bụla nke TrackR ngwa gafere n'akụkụ ihe ahụ furu efu, anyị ga-enweta ihe ngosi na-egosi ọnọdụ GPS. O doro anya na ọ na-ewe nnukwu obodo ọrụ maka atụmatụ a bara uru n'ezie, mana oge ruo n'oge.
Site na ngwa anyị ga-ahụ nke ahụ anyị nwere ike iji ihe ruru 10 TrackR Bravo chọta otu oge a ga-ejikwa otu ngwa gam akporo gam akporo. Anyị nwekwara ike ịhazi ya ka ekwentị ahụ wepụta mgbama na-anụ ụda oge ọ bụla ọ kwụsịrị na mpaghara nchọta ejikọtara. Dịka ọmụmaatụ iji zere nke ahụ, dịka ọmụmaatụ, ị na-echefu igodo ndị dị n'ụlọ.
Ọ́ bụrụkwanụ na ụlọ gị ma ọ bụ ọfịs ga-ebu ibu ka onye ahụ chọta ya? Echegbula, ị gaghị agbanyụ mkpu oge ọ bụla maka atọ kemgbe ị nwere ike ịmepụta Wi-Fi ebe na nke alerts ga-mechie ọnụ ma ọ bụrụhaala na ekwentị mkpanaaka jikọọ na netwọk ndị a.
Otu ihe m masịrị m bụ eziokwu ahụ bụ na, ọ bụrụ na ihe furu efu bụ ekwentị mkpanaaka gị, ịpị bọtịnụ TrackR Bravo ga-arụ ọrụ mkpọtụ na ekwentị na ike dị ka ike nke okwu okwu agbakwunyere na ekwentị gị.
TrackR Bravo, na-anwale ya n'okporo ámá
Ọ dị mma, achọtala m igodo na obere akpa n'ụlọ m, mana ọ na -adị mfe ịchọta ha n'ụlọ yana mkpu nwere ike ịnụ na ngwaọrụ na-apụta, mana kedu maka n'èzí? Maka nke a O zoro mkpịsị ugodi m n'otu ebe dị n'ogige ntụrụndụ, ọ zitere m ọnọdụ ahụ ma apụ m ịchọta na ha na-eji ngwa ahụ.
Amaghị m ebe o jiri mkpịsị ugodi ahụ zoo onye ahụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ebe dị mma. Mgbe ịmechara obere mpaghara gburugburu mpaghara ahụ wee nweta ekwentị jikọọ TrackR Bravo, nke ahụ pụtara na igodo m m hụrụ n'anya dị nso.
Emegoro m ụda ahụ ma tinye uche na ịchọta ụda ahụ. Onweghị ihe. Noisezụ ndị gbara ha gburugburu kpuchiri mkpu pager kpamkpam. N'ikpeazụ, mgbe ọsụsọ na-agba m ntakịrị, ejisiri m ike ịchọta onye nchọta ya na igodo m, ọ bụ ezie na ọ bụghị ekele maka mkpu a na-anụ ụda kama na sistemụ nke ngwa ahụ nyere ka ị wee nwee ike ịhụ ọkwa dị nso nke ihe a ga-enyocha (dị nso , nso, nso ma obu ile anya).
Enweghị m ntụpọ decibel mana enwere m otu ihe doro anya: TrackR Bravo enweghị 85 dB ọbụlagodi na nrọ. M ebudatara decibel ụfọdụ site na ngwa ngwa Google ma, na-eche na ụdị ngwa ndị a ga-enwe ụda olu dị ala karịa mita ọkachamara, atụpụtara m n'ụlọ n'abalị (nke mere na ịgbachi nkịtị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngụkọta).
Mgbe emechara mkpọtụ TrackR Bravo, ngwa ahụ kara akara nke 50 dB. N'agbanyeghị ole oke njehie ngwa nwere, enwere m ike ikwenye na TrackR Bravo enweghị ike ụda kachasị mma, n'agbanyeghị M ka na-ahụ ya ka ọ bụrụ ihe na-atọ m ezigbo ụtọ.
Mkpebi mgbe nwalere TrackR Bravo
Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ihe efunahụ gị n'okporo ámá, ọ ga-esiri gị ike ịchọta ya site na iji mkpu a na-anụ olu nke onye nchọta, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị etinye ya n'ime obere akpa. Mana agwala m gị nke ahụ ijikwa ihe gị niile achịkwa ụlọ bụ ngwa ọrụ bara ezigbo uru.
Ihe karịrị otu oge Ejirila m TrackR Bravo chọta obere akpa m n’ụlọ na, buru n'uche nke ahụ ugbu aNwere ike ịchọta ya na Amazon naanị euro 20.95, Echere m na ọ bụ a n'ezie dị mkpa gadget maka ndị dị ka m, n'ezie enweghị isi.
Ọ bụ obere na kemfe ngwaọrụ
TrackR Bravo dị mfe ma kensinammuo iji
Theda dị ntakịrị ntakịrị ịchọta onye na-ahụ ebe ọ na-eme mkpọtụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » TrackR Bravo, chefuo ihe ga-efunahụ gị
na-ahụ n'anya post
hello, banyere onye na-egwu egwu, na mgbasa ozi ha na-egosi otu ha si eso igwe na cel gps, ebe ha na-ahụta igwe kwụ otu ebe na echere !!!
Achọghị m na ọ ga-ekwe omume na sistemụ, ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịgwa m, m ga-enwe ekele dị ukwuu.
Daalụ nke ukwuu Gabriel La Plata Bs AS
Jorge A Ibanez J dijo
Ọ bụ mgbasa ozi na-eduhie eduhie, ngwaọrụ ahụ nwere mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ, ọ nweghị ike ịchọta ihe ndị dị n'ụlọ ahụ n'onwe ya, ahapụrụ m igodo ahụ n'ime ụlọ m wee kwaga 6 mita ma were ihe karịrị 5 nkeji iji gbalịa ijikọ. Kpamkpam edikpu. Anaghị m akwado ya, ị nwere ike ịhụ nkọwa ndị na-abụkarị ihe ọjọọ na ngwa gọọmentị.
Zaghachi Jorge A Ibañez J
Ndị a bụ ihe oyiyi mbụ nke mbụ Meizu smartwatch; enwere ike ikwuputa na August 10